पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो,नयाँ मूल्य कति ? – BIG FM 101.2 MHz
Home » राष्ट्रिय » पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो,नयाँ मूल्य कति ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो,नयाँ मूल्य कति ?
१७ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्य घटाएको छ । सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँ घटाएको निगम सञ्चालक समितिका सदस्य अरिबन्द अग्रवालले जानकारी दिए । भारतीय आयल निगमले आइतबार पठाएको नयाँ मुल्य सूचीअनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको हो ।
नयाँ मूल्य अनुसार अब पेट्रोल प्रतिलिटर ११२ रुपैयाँमा किन्न पाइनेछ । यस्तै डिजेल र मटितेलको मूल्य प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँमा झरेको छ ।निगमले हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य यथावत राखेको छ । यो समायोजन पश्चात् पनि भारतको रक्सौल भन्दा नेपालको वीरगंजतर्फको सीमा मूल्यमा पेट्रोलमा १२।३२ रुपैयाँ प्रतिलिटरले र डिजेलमा १५।७१ रुपैयाँले सस्तो हो । निगमलाई यो आथिर्क वर्षमा मात्र ३ अर्व ८४ करोड घाटा भइसकेको निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले बताए ।
खरिद मूल्य अत्याधिक बढेको बखतमा पनि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संसदिय समितीको चाडवाडको बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाउन अनुरोध भएपछि निगमले मूल्यवृद्धि गरेको थिएन । अब निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ११।४४ रुपैयाँ नाफा छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ५।८१ रुपैयाँ छ । ग्याँसमा भने प्रति सिलिण्डर २८४।८३ रुपैयाँ घाटा छ । समग्रमा निगमलाई आगामी १५ दिनमा करीब ५६ करोड ५८ लाख नाफा हुनेछ ।